घर निर्माण गर्दा कसरी जो’गाउने पैसा ? पढ्नुहोस् बिज्ञका सल्लाह ! - SandeshMedia.com
१७ मंसिर २०७७, बुधबार ०४:३६
काठमाडौं : घर निर्माण गर्न वा किन्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । घर निर्माण गर्दा आफ्नो चाहना अनुकूलको चिजवस्तु र सुविधा थप्दै जाँदा लगानी अझ बढ्दै जान्छ । अन्तिम लागतमा नियन्त्रण गर्नु भनेको प्रमुख सकारात्मक पक्ष हो । धेरै पक्ष मा चनाखो नहुँदा पैसा खर्च हुँदै जान्छ । तर, सपनाको घर आफ्नो बजेटभित्र रहेर पनि निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तल भनिएका कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
निर्धारित बजेटमा अडिग रहनुहोस् : घर निर्माणकर्ता वा व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई भेट्नुअघि आफूले गर्न सक्ने खर्चबारे वित्तीय सल्लाहकारसँग छलफल गर्नुहोस् । सरसल्लह लिनु होस् । ‘नयाँ घरमा यति लगानी गर्छु’ भन्दा पनि ‘मेरो खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य यति हो’ भन्ने कुरा बुझ्न अति महत्वपूर्ण छ । आफ्नो क्षमता अनुरूप बजेट निर्धारण गर्नुहोस् र त्यसैअनुसार प्रक्रियामा जानुहोस् ।
आधार मूल्यसँग लचक हुनुहोस् : नयाँ बन्दै गरेको घरमा पहिले देखिने लागत भनेको आधार मूल्य हो । यसमा घरको आधार भूत संरचना र त्यसको अन्तिम स्वरूप हो । आधार मूल्यमा अन्य संरचना समावेश हुँ’दैन । जस्तो कि कोठाको पार्टिसन, आन्तरिक वा बाह्य सजावटका सं’स्करण आदि । यी निर्माणका पाटा पछि थप गर्दै जाने प्रक्रिया हुन् । त्यसैले नयाँ घर किन्दा आधार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र खरिद गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंले आफ्नो बजेटअनुसार नयाँ सजावट र संस्करण थप्दै जान सक्नुहुन्छ । यसरी अनावश्यक खर्च नगरी आफ्नो प्रारम्भिक बजेटअनुसार लगानी गर्न सक्नुहुनेछ ।
बुद्धिमानीपूर्वक निर्माणकर्ता छान्नुहोस् : तपाईंको क्षेत्र वरपर काम गर्दै गरेका विभिन्न निर्माणकर्ताबीच तुलना गर्नुहोस् र कसले कम लागतमा विशिष्ट सेवा दिन सक्छ, त्यस अनुसार निर्माण कर्ता वा ठेकेदार छान्नुहोस् । केही ठेकेदारले कम वा सापेक्षिक मूल्यमा उच्च गुणस्तरको निर्माण, आकर्षक डिजाइनका संरचना बनाउने गर्छन् । त्यसैले कुन चाहिँ निर्माणकर्तालाई काम सुम्पिने भन्ने कुराको निर्णय गर्न केही अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ । लगानीको साथसाथै गुणस्तरका विषयमा पनि स्पष्ट हुुनु होस् । किनभने, तपाईले खर्च गर्नुभएको कुनै पनि पैसाको प्रतिफल कम गुणस्तर वा खराब डिजाइन हुनु हुँदैन ।
आफूले जानेको काम आफैँ सम्पन्न गर्नुहोस् : धेरै निर्माणकर्ता उनीहरूको मूल्य निर्धारणमा निष्पक्ष रहने गर्छन् । तर, घरको धेरै चिजको जडान र स्थापना गर्दा व्यावसायिक श्रमिकले लिने पारिश्रमिकमा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ । यदि तपाईं सम्बन्धित काममा सक्षम र जानकार हुनुहुन्छ भने धेरै पैसा जोगाउन सकिन्छ। वायरिङ, प्लम्बिङको सीप छ भने हार्डवेयर सामान वा विभिन्न उपकरण जडान गर्न सहज हुन सक्छ । यसरी आफूले जानेको कामको जिम्मा आफँै लिएर पनि पैसा बचाउन सकिन्छ।
दैनिक प्रयोग हुने उपकरणको अनुसन्धान गर्नुहोस : निर्माण कर्ताले केही उपकरण निर्माता वा कम्पनीसँग सम्झौता गरी ती उपकरण खरिदको लागि तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर, सोही प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिनुपर्छ भन्ने छैन । तपाईं आफैँले पनि कम लागतमा पाइने उपकरणको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ । उपकरणहरूको लागतमा धेरै विविधता हुन्छ । केही अनुसन्धान गरेमा पक्कै पनि सस्तो मूल्यमा उपकरण पाइन सक्छ । आफूलाई आवश्यक परेको उपकरण आफूले चाहेको सा’न्दर्भिक मूल्यमा खरिद गर्नाले तपाईंको बजेट पनि अर्थपूर्ण रहन्छ ।
भुइँ सजाउँदा : भुइँमा काठजस्तै देखिने विकल्पका वस्तु प्रयोग गरी लागतलाई कम पार्न सकिन्छ। लेमिनेट गरिएका कडा प्लास्टिक वा भिनाइलको प्रयोग गरी भुइँमा काठको जस्तै स्वरूप प्रदान गर्न सकिन्छ । जुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्न आउँछ । यस्ता चिज नकोरिने र पानीले असर नगर्ने हुँदा किफायती र लामो समयसम्म टिक्ने गर्छ । कडा काठका भुइँ मात्र सर्वश्रेष्ठ हुन् वा यसको विकल्प छैन भन्ने मानसिकतालाई त्याग्न जरुरी छ । काठजस्तै देखिने र टिकाउ हुने वस्तु प्रयोग गर्नु पनि पैसा बचत गर्ने उचित उपाय हो ।
पछि संस्करण थप्नुहोस् : निर्माण संरचनामा पछि थपिने वा जडान गरिने सजावटका सामग्री तपाईंको निर्माणकर्ताले प्रस्ताव गरेको सीमित क्षेत्रबाट भन्दा पनि आफैँले बजार बुझेर तुलना गरी खरिद गर्नुहोस। श्रेणीगत विकल्पको स्थापना आधार मूल्यमै समावेश रहने हुनाले आफ्नो बजेटअनुसार त्यसमा संस्करण थप्न सकिन्छ । यस्ता सजावटका सामग्री सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरमा कम मूल्यमा आकर्षक डिजाइनमा फेला पार्न सकिन्छ । विभिन्न वेबसाइटको सहाराले सस्तो बजारबारे बुझ्न सकिन्छ । अझ ती सामग्री आफैँले जडान गरेर थप पैसा बचत गर्न सकिन्छ ।
खर्चको विवरण राख्नुहोस् : घरलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गरी बसाइँ सर्नु अघिसम्मका सबै खर्च र आफ्नो निर्णयबारे तथ्यांक राख्नु होस् । यसो गर्दा आफूले खर्च गरेको रकमबारे तपाईंलाई जानकारी रहन्छ । केही काम आवश्यक छ भने निर्माणकर्ताले तपाईंलाई त्यो काम जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तर, तपाईले त्यसको आवश्यकता र उपयोगिताबारे स्वअध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसपश्चात् मात्र सो काम सम्पन्न गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नयाँ घर निर्माणको क्रममा पैसा बचत गर्नका लागि सचेत उपभोक्ताको रूपमा कार्य गर्न आवश्यक पर्छ । तपाईंले चाहनु भएका वस्तु र आवश्यकता बीच सन्तुलन खोजी पैसा बचाउने सिर्जनात्मक तरिकाको अवलम्बन गर्नुपर्छ । नयाँ निर्माण गर्न कहिल्यै पनि सस्तो पर्न आउँदैन तर तपाईं कत्तिको बजेटमैत्री बन्नु हुन्छ, यो कुरा मुख्य हुन्छ। सुविधाको लागि अनावश्यक खर्च नगरीकन आफ्नो बजेट कहाँ जाँदै छ, त्यसमा जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् । यसरी बजेटमा ध्यान पु¥याएर पैसा बचत गर्दै आवश्यकीय काममा खर्च गरेमा सुन्दर घर हुनुको साथै केही पैसा बाँकी पनि रहन्छ । जसबाट थप फर्निचर वा उपकरण किन्न सकिन्छ । नेपाल होम्सबाट
७ असार २०७८, सोमबार ०४:०२
७ असार २०७८, सोमबार ०३:५२
७ असार २०७८, सोमबार ०३:१६
८ असार २०७८, मंगलवार ०४:५७
८ असार २०७८, मंगलवार ०४:३७